Okwa di elu, nke abuo, na uzo ahia ahia ala nke uto ahia | Martech Zone
Ọ bụrụ n ’ịjụ ọtụtụ ndị mmadụ ebe ha hụrụ ndị na-ege ha ntị, ị ga-enweta azịza dị warara. Imirikiti ọrụ mgbasa ozi na ịzụ ahịa jikọtara ya na nhọrọ ndị na-ere njem ozu ahia… Ma nke ahụ egbuola oge?
Ọ bụrụ na ị bụ onye nyocha mgbanwe dijitalụ kwụsie ike; dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike mejupụta nkọwa niile na mpempe akwụkwọ site na ịlele atụmanya gị ugbu a ma dabere na usoro ị maara nke ọma. Nwere ike ịme nyocha isiokwu ma lekwasị anya na engines ọchụchọ maka ndị ọrụ ahụ na-achọ ụlọ ọrụ mgbanwe dijitalụ, ọkachamara dijitalụ ndụmọdụ, ụlọ ọrụ mmejuputa iwu ụlọ ọrụ, Wdg
Na-agagharị n’elu nke B2B yingzụcha njem
Ọ bụghị ihe niile gbasara gị ndị na-ege ntị. Ọ bụkwa banyere ndị ahịa gị ugbu a, ọrụ gị dị elu na ọrụ ha.
Vinglaghachi na ihe atụ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbanwe mgbanwe dijitalụ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-enweta nnukwu ego iji bulie nzukọ ha… ihe dị mkpa na usoro a bụ itinye ego na mgbanwe dijitalụ. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na a gbasaa ndị isi ọrụ n'ime nzukọ, ndị isi ọhụụ ha nwere ike chọọ ịgbanwe ahụmịhe ndị ahịa ha.
Yabụ, ọ bụrụ na m bụ ụlọ ọrụ mgbanwe dijitalụ, ọ bụ maka ọdịmma m ka mụ mma mmekọrịta n'etiti ụlọ ọrụ ndị gbagoro agbago. Nke a nwere ike ịgụnye:
Venture Isi Obodo - ịnye ndị ahịa VC ihe ngosi ga-abụ ụzọ dị mma iji wulite ma kụziere ndị ahịa ihe.
Gerslọ ọrụ Mergers & Nnweta - inye ụlọ ọrụ M&A nyocha na agụmakwụkwọ ga-adị mma. Ka ha jikọtara ọnụ wee nweta ndị ahịa, ha ga-enwe nsogbu iji hazie ahụmịhe dijitalụ ha.
Ndị ọkàiwu na Akaụntụ - otu n’ime ihe mbu ụlọ ọrụ na-eme ka ha bulie elu bụ ịrụ ọrụ na ndị nnọchi anya iwu na ego.
Firlọ ọrụ nchịkọta - Azụmaahịa ndị na-eto ma ọ bụ na-atụgharị n'ọkwá ndị isi na-arụkarị ọrụ na ndị ọkachamara mbanye iji weta onyinye n'ime nzukọ ahụ.
Kedụ ụdị azụmaahịa gị na ndị gị na ha na - azụ ahịa nwere ike ịbụ otu.
Inye ndi ozo nye ndi ahia gi
Otu n'ime ihe ndị kasị akụda mmụọ ozi ịnụ a ahịa bụ, "Anyị amaghị na gị na ụlọ ọrụ nyere na!" mgbe ị nụsịrị akụkọ na ha bịanyere aka na ụlọ ọrụ ọzọ.
Nzọụkwụ dị oke mkpa maka ịbanye na onye ahịa gị bụ ịkọwa ngwaahịa niile, ọrụ, yana ohere ndị mmekọ gị nwere ike ịnye ha. N'ihi na ị na-ama nwere guzosie ike mmekọrịta na ụlọ ọrụ, ike ugbua e depụtara na ha ajụjụ usoro maka ịkwụ ụgwọ, ama-acha ọbara ọbara-agbakọta gị ọrụ nkwekọrịta… ọ bụ mgbe mfe mụbaa mmekọrịta gị na ha.
Mkpakọrịta na òtù ndị ọzọ ị tụkwasịrị obi na-abụkarị ohere dị ukwuu iji wulite uru na ọbụna na-akpata ego. Anyị nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ntinye aka na ọtụtụ ụlọ ọrụ anyị maara ma tụkwasị obi ịrụ nnukwu ọrụ maka ndị ahịa anyị. Ọ bụ usoro mmeri maka ma ndị ahịa gị ma ego nke aka gị.
Kedu ụlọ ọrụ ibe ị maara ma tụkwasị obi na ị nwere ike iwebata ndị ahịa gị? Agreements nwere nkwekọrịta ntụgharị aka na ha?
Bụ A Downstream Resource Gị Ugbu A ahịa
Mgbe anyị mechara ndị anyị na ndị ahịa mejuputara anyị, ndị na-eweta ngwanrọ na-akpọtụrụ ha mgbe ọ bụla ka ha kwuo okwu na nzukọ, sonye na ajụjụ ọnụ, ma kwuo ha na akwụkwọ ụlọ ọrụ.
N'ihi na ịnyela ahụmịhe pụtara ìhè maka onye ahịa gị, wepụta oge iji soro ha nwee ohere maka ohere nkwado. Firmlọ ọrụ mmekọrịta gị na ọha ga-arụ ọrụ iji mee ka ha na-ekwu okwu ohere na ndị ahịa gị kwesịrị inyere ha aka na-ede akwụkwọ chere echiche okwu ndu na saịtị ụlọ ọrụ.
Ka ha na-enweta ohere ndị ahụ, ọ bụ ihe dị mma na a ga-akpọ ụlọ ọrụ gị n'ọnọdụ ọdịnaya ha na-enye. N'ihi na ha anaghị arụ ọrụ n'ihi na ị akwụghị ụgwọ by gị, ha na-agwa ndị na-ege ntị okwu dị ka ikike na onye otu ọ tụkwasịrị obi. Thatdị nkwado nke ndị ahịa a ga-eme ka ị mata banyere ọrụ ị na-arụ.
Kedụ ka ị ga - esi nyere ndị ahịa gị aka ịkwalite ọganiihu ha n’iso gị? Kedu ihe onwunwe ị nwere ike inye ha na usoro ahụ iji mee ka azụmahịa gị mara?
Gini mere iji gbaga n’otu ebe ndi niile gi na ya? Bido ịrụ ọrụ n’elu, ala na n’ihu ndị ahịa gị ugbu a iji mee ka ọrụ gị ka mma.
Tags: b2bmbọnndị na-azụ ahịa njemdesigngbadataahia ahia alainbound marketingMgbakọ AhịaMobile na Mbadamba ụrọmobile ngwa ọdịnalanetwọkmmekoritaịkparịta ụka n'socialntanetegosi ahiaelu ugwuelu ahiawebinars
Sqribble: Pịa, Chepụta, ma bipụta akwụkwọ nke gị, Nnyocha ọmụmụ, ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ na nkeji